Madaxweyne Xasan: Waa in dowladda looga dambeeyo howlaha loo igmaday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dib ugu soo laabtay maanta Muqdisho ka dib booqsho labo habeen qaadatay ee uu ku joogay magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Bay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wada-hadallo iyo la tashiyo la soo sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshadda kuna dhiiro-geliyey in artagtida kala duwan lagu xaliyo wadahadal, dib-uheshiisiin, is-afgarad iyo nabad, sidaa waxaa lagu war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Soomaaiya.
Madaxweyanaha Soomaaliya Xasan sheekh Maxamuud ayaa ka mahad-celiyey sida loogu soo dhaweyey magaalada Baydhabo isla-markaana ugu baaqay siyaasiyiinta iyo shacabka inay midnimo muujiyaan.
“Maanta fursad ayeynu heysanaa waa inaad isku dulqaadataan oo aad meel wada fariisataan si mar walba midnimadda loo ilaaliyo, marar badan ayey dhibaato ka timid is-maqli waa iyo dulqaad yari” ayuu yiri madaxweyne Xasan.
“Dowladda ayaa hormuud u ah wax walba oo dalka ka socda iyada ayaana masuuliyadda leh marka waa in dowladda looga dambeeyo waxyaalaha loo igmaday” ayuu sidoo kale yiri Madaxweynahu.
Ugu dambeyntii, warka kazoo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu sheegay in hogaamiye dhaqameedyadda iyo dhammaan dadkii kale ee uu la kulmay madaxweyanaha ay ballan qaadeen iney sii wadayaan wadahadaladda, dowladdana la shaqeynayaan.